RUISSIA: Kremlin inodaidzira kusunungurwa kweVarussia vakasungwa muBelarus - teles relay
Vanochengetedzeka veBelarusian vakasunga vanhu veRussia neChitatu, vachiti vaive pachinangwa chekutapa nyika nyika.
Kremlin yakadana vaBelarus vaichimbova mubatanidzwa weSoviet kuti vaburitse varume makumi matatu nevaviri veRussia vakasungwa muMinsk pamusoro pezvavari kupomerwa kuronga mhirizhonga pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika dzinouya.
Vanochengetedzeka veBelarusian vakasunga boka revanhu veRussia neChitatu, vachiti ivo vaive maseneta pachinangwa chekugadzirisa nyika pamberi pesarudzo dzaAugust 9.
Belarusian KGB yekuchengetedza vashandi vakati varume ava vaive nhengo dzeWagner Group, ine mbiri yakazvimirira kambani yemauto inofungidzirwa kuti inodzorwa nemubatanidzwa weMutungamiri weRussia Vladimir Putin.
"Tinovimba kuti munguva pfupi inotevera chiitiko ichi chichatsanangurwa nemubatanidzwa wedu weBelarusian uye kuti vagari vachaburitswa," mutaurikadzi weKremlin, Dmitry Peskov nemusi weChishanu.
Akawedzera kuti "kusungwa zvisina tsarukano kwevagari veRussia hakuenderani nemabatiro ehukama".
Vanoongorora nezveBelarusian vanoti varume ava vaishanda nevatsoropodzi vanopokana naSergei Tikhanovsky naMikola Statkevich, avo vaviri vakasungwa uye vakarambidzwa kukwikwidza sarudzo.
Peskov akasimbisa kuti varume veRussia "vashandi vekambani yakazvimiririra yekuchengetedza" avo vaigara kwenguva pfupi muBelarus vasati vaenda kuIstanbul.
"Vakapotsa ndege yavo," akadaro. "Vakanga vane matikiti ekuenda kuIstanbul. "
Muongorori wemuBelarusian akataura munhepfenyuro kuti zvirongwa zvevarume zverwendo urwu zvinongova "alibi," iyo saiti yeTut.by inhau yakataura.
"Sekuferefeta kwavakaona, ivo vaive vasina hurongwa hwekuenda ikoko (kuIstanbul)," mukuru wechikwata chekuongorora, Alexander Agafonov, akadaro mukukurukurirana ne terevhizheni yenyika. .
Varume vacho vakapa mhinduro "dzinopesana", akawedzera.
Gumi nerimwe vavaiti vakafunga kuenda kuVenezuela, gumi neshanu kuTurkey, mbiri kuCuba uye imwe kuenda kuSyria. Mumwe "aisaziva kwaanga achibhururuka" uye vamwe vakaramba kupupura, Agafonov akadaro.
Musarudzo huru yemusangano muguta guru reMinsk nemusi weChina, Svetlana Tikhanovskaya - muvengi mukuru weBelarusian murume akasimba Alexander Lukashenko - akaramba kuti kupikisa kwanga kuri kushanda nemadzishe eRussia kumutsa mhirizhonga. misa.
Tikhanovskaya, uyo akaroora akaiswa mujeri blogger Tikhanovsky, akati vanhu vanongoda sarudzo.
Vati makontrakta akazvimirira eRussia anogona kunge ave achishandisa Belarus nzvimbo yekufambisa kwenguva yakareba uye akabvunza nguva yekusungwa kwevhiki rino.
kunobva: https: //www.aljazeera.com/news/2020/07/kremlin-demands-release-russians-held-belarus-200731203427261.html
COVID-19: 4 vashandi vengarava yeNorway yekufamba nengarava muchipatara
India: 'Kisan Rail' chirongwa chekubatsira varimi: PM Narendra Modi | India ...
Kudzoreredza nhaka yeAfrica: kusangana nevamiriri vanopomedzerwa mhosva ...